GBM-12D-R V & X karazana milina beveling mpiara vilia
GBM by vy takela beveling milina lehibe amin'ny asa isan-karazany ny lovia fepetra arahana. Omeo high quality, fahombiazana, azo antoka sy mora kokoa ho an'ny Weld fanomanana hetsika.
Daty nanomezana: 5-15days
GBM-12D-R V & X karazana mpiara vilia beveling milina
GBM-12D-R high efficiency metal vilia beveling milinabe mpampiasa amin'ny fanorenana orinasa ho an'ny Weld fanomanana amin'ny turnable safidy ho an'ny lafiny roa heny beveling.Clamp hatevin'ny 6-30mm isan-karazany sy ny anjely bevel 25-45degree Adjustable avo fahombiazana amin'ny fanodinana 1.5-2.6meters isaky ny min. Manampy alot amin'ny asa fahavaratra.
Model TSIA. GBM-12D-R metal plate beveling milina
Ny hafainganam-pandeha 1.5-2.6metesr / min
Clamp hateviny 6-30mm
Fehiny > 75mm
Weight for Turnable safidy GBM-12D-R NW 236KGS GW 285KGS
2. IE3 Standard maotera amin'ny 750W
3. Hight fahombiazana dia afaka tonga amin'ny 1.5-2.6meter / min
6. Max bevel sakany dia afaka tonga 18mm
7. Easy asa sy ny turnable ho an'ny lafiny roa bevel fanodinana.
Previous: GBM-16D adidy mavesatra vy takela beveling milina
Manaraka: GBM-12D Metal vilia beveling milina
avo roa heny lafiny beveling milina
Double Side beveling Fitaovana
vy beveling milina
lovia Beveler Machine
lovia Beveling Machine For Sale
lovia Beveling Machine Manufacturers
portable lovia beveler
amin'ny toerana Plate Beveling Machine
Steel Plate Bevel Fitaovana
V mpiara beveling milina
X mpiara beveling milina